PSJTV | सिंगापुरबाटै मन्त्रिपरिषद् बैठकः भिडियो कन्फरेन्स कति सुरक्षित?
सिंगापुरबाटै मन्त्रिपरिषद् बैठकः भिडियो कन्फरेन्स कति सुरक्षित?
उपचारका लागि सिंगापुरमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार भियो कन्फरेन्समार्फत् मन्त्रिपरिषद् बैठक गरेका छन्।
प्रविधि प्रयोगका हिसाबले नेपालको इतिहासमा यो पहिलो घटना भए पनि सुरक्षाका हिसावले भने प्रश्नहरु उठेका छन्।
आइटी विज्ञहरुले भिडियो कन्फरेन्समार्फत् गरिने बैठक सूचना चुहावटको हिसाबले सुरक्षित नहुने बताएका छन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीले भिडियो कन्फरेन्समार्फत् बैठक गरेर राज्यको गोपनियताको चिरहरण गरेको बताएको खबर आजको नागरिक दैनिकमा छ।
सिग्देल र भण्डारीलाई उपरथीको दर्ज्यानी चिन्ह